Dowladda Federaalka Soomaaliya oo cambaareysay markab dhuxul ka qaaday dalka oo gaaray Ciraaq - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Federaalka Soomaaliya oo cambaareysay markab dhuxul ka qaaday dalka oo gaaray Ciraaq
Dhuxul laga rarayo dekada Kismaayo. [Sawirka: AFP]
Muqdisho -(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa cambaareysay markab sida dhuxul laga keenay Soomaaliya oo tagay dalka Ciraaq.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Abuukar Daahir Cusmaan ayaa warbaahinta u sheegay in markabka oo ka yimid koonfurta Soomaaliya sidana 200,000 kiish oo dhuxul ah uu ku xirtay dekada Umm Qasri ee Ciraaq.
Abuukar ayaa cambaareeyay dhammaan dadka ku lugta leh dhoofinta dhuxushaas sharci darada ah, waxaana uu sheegay in ay khatar ku keeni karto ammaanka Soomaaliya sababtoo ah kooxaha xagjiriinta ah sida Al-Shabaab ayaa ka heli kara dakhli dhaqaale.
Markabka ayaa lagu waramay in uu wato dukumentiyo been abuur ah oo muujinaya in uu ka yimid dalka Ghana.
Lama oga dekada laga raray dhuxushaas balse waxaa loo maleynayaa in markabka uu dhuxusha ka qaaday mid kamid ah xeebaha koonfurta Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka codsatay dowladda Ciraaq in ay baaritaan deg-deg ah ku sameyso arrinta markabkaas dhuxusha ka keenay Soomaaliya.
April 16, 2019 Dilka hoggaamiye ku xigeenka ISIS waxa uu u muqdaa mid diciifin kara weerarada ISIS ee gudaha Puntland